भूलेर पनि नराख्नुहोस् बच्चाको यस्तो नाम, नत्र पूरै जिन्दगी हुन्छ बदनाम – Sandesh Press
June 22, 2021 299
हुनपनि नाम भनेको बच्चाको पहिचान हो । जीवनभर उसले त्यही नाम बोकेर हिँड्छ । त्यही नामले उनी चिनिन्छन् । त्यही नाम लिएर उसले स्कुल भर्ना हुनेदेखि विभिन्न कामकाज गर्ने गर्छन् ।
कसरी खोज्ने राम्रो नाम ?
बच्चाको नाम राख्दा परम्परा, सामाजिक नियम, पारिवारिक रीति-रिवाजलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ ।
अहिले कतिपय आमाबुबाले पौराणिक पात्रको नामबाट बच्चाको नाम राखिदिने गर्छन्, जो आदर्श पात्र थिए। तर यस्ता कति नामहरु उच्चहरण गर्न सजिलो हुँदैन ।
कतिपय आमाबुबाले अंग्रेजी वा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावमा त्यही अनुसारको नाम राखिदिन्छन्, जो नेपालीमा उच्चाहरण गर्दा जिब्रो सजिलै चल्दैन ।
नाम राख्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, बच्चाको नाम सजिलै उच्चाहरण गर्न सकियोस् । लेख्दा पनि सरल होस। पछि बच्चाको आवश्यक कागजात तयार गर्दा होस् वा प्रशासनिक काम गर्दा, सजिलो नाममा त्रुटी हुने वा कुनै पनि किसिमको झन्झट हुने भय हुँदैन।
अप्ठ्यारो नामले कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो नै पार्न सक्छ। बोल्न असजिलो हुने नाम राख्नु हुँदैन। ‘युनिक’ अर्थात पृथक नाम राख्ने चक्करमा बोल्नै गाह्रो हुने नाम राख्नु उपयुक्त हुँदैन।
यस्ता गल्ती नगरौं
बच्चाको नाम कुनै स्थानको नामबाट नराखौं । कुनै प्रशिद्ध स्थान, शहर, नदीनाला आदिको नामबाट बच्चाको नाम नराखौं ।
आफ्ना बच्चाको नाम यस्तो पनि नराखौं कि, जसको अगाडि वा पछाडिको अक्षर थोरै थपघट गर्दा त्यसको अनर्थ नलागोस् । अर्थात हास्यास्पद नाम नहोस् ।
Prevडाइबिटिजका व्यक्तिलाई एनिमियाँ हुँदा भुलेर पनि नखानुहोस् यी खाना, नत्र किड्निमा पार्दछ असर !
Nextआज बाट काठमाडौंमा नयाँ नियम : गर्न हुने र नहुने गतिविधि यस्ता छन् ! सूचना पढेर मात्र बाहिर निस्किनु होला